Ihe 12 Ikwesiri Ime Mgbe I Dechara Blog
Anyị dere ederede ederede gbasara otu esi eme ya ebuli gị ọzọ blog post. a ozi sitere na DivvyHQ, ngwa kalịnda ederede na-enweghị akwụkwọ mgbasa ozi na-agagharị na usoro ụfọdụ iji kwalite ọdịnaya gị mgbe ebipụtara.
Naanị ihe m na-echetụ n’ịjụ bụ ndị na - ede blọgụ ndị ọzọ ịkwalite ọdịnaya gị. Ọ bụrụ na ị dee oke ọdịnaya, ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ ga- ịkọrọ ya… Ọ dị m ka ọ bụ ntakịrị mkparị naanị ịjụ. Enwere m ike dochie ihe a akwụ ụgwọ nkwalite. Tinye n'ọrụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi, Ọpụpụ, ma ọ bụ usoro ọzọ nwere ike ime ka achọpụta ma kesaa ọdịnaya gị.
Tags: blog post nkwalitenkwalite blogkwalite blog postkwalite mgbasa ozi gị
Nov 17, 2016 na 10:40 PM
Enwere ụzọ iji bipụta eserese a? Ọ ga-amasị m idebe ya n'aka mgbe m biputere ya.
Nov 19, 2016 na 9:47 PM
Ikekwe naanị ịbipụta ya n'ezie graphic, wee CTRL-P bipụta! Emere m njikọ ebe ahụ iji mepe ya na windo ọhụrụ.